Taco သုပ်ကြော် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ကြော် zucchini နှင့်အတူအစေခံရန်ငံပြာရည်
Taco သုပ်ကြော် အလွယ်တကူစားရန်စူပါပျော်စရာရဲ့အရသာရှိတဲ့, အရသာရှိတဲ့, crunchy မုန့်ညက်အဖြစ်သူ့ဟာသူများအတွက်နာမည်အောင်! ငါတို့သွားသည် taco သုပ် အရသာရှိသောအကြပ်အတည်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ fave ပြောင်းဖူးချစ်ပ်များနှင့်တွဲထားသည်။
လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ချဉ်သောမုန့်နှင့်တူသောထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုနှင့်အတူထိပ်တန်း အိမ်လုပ်ဆဲလ်ဆာ ဒါမှမဟုတ် အကောင်းဆုံး guacamole ။
တစ်သုတ်လုပ်၏ တင် nachos ဤစူပါလွယ်ကူသောသုပ်စာရွက်နှင့်အတူလတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေါ်တက် load အပေါင်းတို့နှင့် ooh ရဲ့နှင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကနေ aah ရဲ့ရ!
Taco အသုပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများသင်တစ် ဦး ၌ထားချင်ပါတယ်သောအရာကိုကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြသည် ပုံမှန်မြေပြင်အမဲသား taco , ဒါပေမယ့်အစား taco ခွံထဲမှာဆလတ်တစ်အိပ်ယာကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး ချင်းအသုပ်လုပ်ပါသို့မဟုတ် Frito taco သုပ်ဘားကိုစုဆောင်းပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပေးပြီးလူတိုင်းကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်ခွင့်ပြုပါ။ ခြေရင်းတပ်ဆင်ပါ၊ လူတို့နှစ်သက်သော ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် add-ins များကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုပါ။
အခြေစိုက်စခန်း: မြေသားအမဲသား၊ ရေခဲတောင်ဆလတ်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဖျက်စီးထားသော cheddar၊ Fritos ပြောင်းဖူးချစ်ပ်များ
တစ်သင်းလုံးကကစားသမား: ဆာလ်, Catalina တစ်သင်းလုံးကကစားသမား, ထောပတ်သီးတစ်သင်းလုံးကကစားသမား , ထောပတ်ခြံတစ်သင်းလုံးကကစားသမား သို့မဟုတ် ဒိန်ခဲအပြာရောင်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား ။
ထည့်သွင်းမှုများ - ငရုတ်ကောင်း, ကြက်သွန်နီ, jalapenos, အစိမ်းချီလီ, သံလွင်အနက်ရောင်, ချဉ်သောမုန့်, ​​guacamole, ဒါမှမဟုတ်ထုံးသပ်။
Frito Taco အသုပ်လုပ်နည်း
သင်တစ် ဦး ချင်းစားသုံးခြင်းသို့မဟုတ်တစ် ဦး ကဲ့သို့လုပ်နိုင်ပါတယ် Dorito Taco သုပ် , ဒီလည်း potluck သို့မဟုတ်ပါတီမှာအစေခံရန်အလွန်ကြီးစွာသောပန်းကန်ပါ! ရုံအသားအရောအနှောချက်ပြုတ်စုဝေးနှင့်အစေခံ!
taco ရာသီထည့်ပါ (သို့မဟုတ် အိမ်လုပ် taco ရာသီ ) နှင့်ရေနှင့်ထူသည်အထိမျှတည်ထားပါ။
သင်လိုချင်သောအ ၀ တ်အစားဖြင့်ဆံချနိုင်သည်သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့စွာအစေခံနိုင်သည်။ ပြီးတာနဲ့ဝတ်ဆင်, အပိုပြောင်းဖူးချစ်ပ်ထည့်ခြင်းနှင့်ငုပ်!
Frito Taco သုပ်နဲ့ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ
ဤအသုပ်သည်သူ့ဟာသူအတွက်သေချာသည်။ သို့သော်လိမ္မော်ရောင်ဆေးတောင့်များသို့မဟုတ်အရောင်တောက်တောက်ကဲ့သို့ citrusy ဘက်သည် သံပုရာရည် သောက်စရာလူအစုအဝေး - နှစ်သက်သူများဖြစ်ကြသည်!
ပိုများသော Yummy Taco မှုတ်သွင်းထားသောချက်ပြုတ်နည်းများ
Taco ဟင်းချို - စံပြသောညဥ့်အစာစားခြင်း။
Crockpot ကြက်သား Tacos - ထားရန်မေ့လျော့ခြင်း
အမဲသား Taco ခေါက်ဆွဲကျွမ်းကျင်မှု - မုန့်ညက် ၃၀ မိနစ်
Tater Tot Casserole Taco - မိသားစုအကြိုက်ဆုံး
5 မိနစ် Taco Dip - ပြီးပြည့်စုံတဲ့ taco မှုတ်သွင်းခံ appetizer!
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၃၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson သင်၏မိသားစုကိုအလွယ်တကူအရသာရှိသောအရသာရှိလှသော Frito Taco အသုပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန်နှင့်စားရန်အလွန်ပျော်ဖို့ကောင်းသည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ taco ရာသီအထုပ် သို့မဟုတ်အိမ်လုပ်
▢၆ ခွက် ရေခဲတောင်ဆလတ် ကုန်တယ်
▢၁ ခွက် ခရမ်းချဉ်သီး ကုန်တယ်
▢၁ ခွက် cheddar ဒိန်ခဲ ဖျက်စီး
▢နှစ် ခွက် Frito ပြောင်းဖူးချစ်ပ်
▢½ ခွက် ငံပြာရည်
▢½ ခွက် Catalina ဆေးထည့် သို့မဟုတ်အရသာအတွက်
▢လိုချင်သောအဖြစ် toppings ငရုတ်ကောင်း, ကြက်သွန်နီ, jalapenos, ချဉ်သောမုန့်
taco ရာသီနှင့်½ခွက်ဖလားကိုရေထည့်ပါ။5မိနစ်သို့မဟုတ်ထူသည်အထိမျှတည်ထားပါ။
ဆလတ်တလုံးကိုအိုးတလုံးထဲထည့်ပါ။ အသား၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဒိန်ခဲ၊ Frito ပြောင်းဖူးချစ်ပ် ၁ ခွက်၊
တစ်သင်းလုံးကကစားသမား Add နှင့်ကောင်းစွာပစ်ချ။ ကျန်ရှိသောပြောင်းဖူးချစ်ပ်နှင့်အတူထိပ်တန်း။ ချက်ချင်းအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွင်လိုချင်သော toppings မပါဝင်ပါ။
သော့ချက်စာလုံးTaco သုပ်ကြော် သင်တန်းအသုပ် ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်မက္ကဆီကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။